हररर आवाज गर्दै टिस्टा बगेको वर्णन मैले कथाहुँदो धेरै ठाउँ र उपन्यासमा पनि धेरै नै पल्ट पढिसकेको लेखिसकेको भए पनि साँच्चै टिस्टाले बहँदै कराएको मैले धीत मारेर सुन्न पाएको थिइनँ। मध्यदिन र मध्यरातमा स्वाँ... लामो ढाक्दो आवाज गरेर टिस्टा खोला बास्छ भनेर पनि बर्खा र हिउँदोमा त्यसको बगरतिर काम गर्न जानेहरूबाट सुनेको छु। तर, कालिम्पोङ-गान्तोक जाँदा-आउँदाको हतारमा गाडीदेखि एकछिन उत्रेर पुलमा पुगेको, पानीमा मास्तिर तल्तिर हेरिपठाएको, त्यतिले टिस्टाको आवाज सुन्ने मेरो तृष्णा र भोक अतृप्त नै रहेको थियो।
महान् भन्न मन लाग्ने हरियो-नीलो जलराशिको बग्दो फैलावटमाथिका सुप्त झैं बालुवाहरूमा अनेकौं विगतका करङहरू कोरिएर रहेको, हावाको वेगले पंखा लागेर वरपरका जम्मै झार-जंगलहरू हल्लिरहेको कल्पनाबीच टिस्टाको हररर- भित्र कतै छुट्टै छललल- को आवाज, कतै भिन्दै भुरुरुरु-हरू पनि भएको र बजेको याद आउँथ्यो...। गान्तोकबाट फर्किएको त्यस दिन त्यसै र त्यहीँ टिस्टामा मैले बास पारेको थिएँ।
'खीर खानु नै हो भने, एक पावा चामललाई दुई सेर दूध चाहिन्छ', ओढार परेका चङ्कला आँखाको चित्र दिने एउटा सोरले किटान गरी-गरी भनिरहेको थियो- 'यति हाम्रो चामललाई दस सेर दूध चाहिन्छ। कति सेर हाल्यो ?'
'कति सेर हाल्यो र? चार सेर त हाल्यो।'
'टिस्टा जस्तो जग्गामा चार सेर नाथु दूधको खीर खाएको, थुक्क!' त्यही अघिको सोरले भन्यो।
'चार सेर दूध हालेको खीर !' पनि भन्योः यस्तरी भन्यो जस्तो कि त्यो कुरा कुनै कालो फाटेको टालो हो र उचालेर सबलाई उसले देखाइरहेछ।
'खीर खानु नै हो भने, धेरै चीज चाहियो,' एउटा बूढो-बूढो सोर माथि चढ्यो- 'पहिले त तिमीहरूको चामलै भएन। नुनिया चामल ल्याउनुपर्छ, मसिनो सलसल परेको...।'
'अलुवा नै किनिसक्नु छैन रै’छ यहाँ।' गम्म परेको मान्छेको जस्तो सोर बोल्यो- 'रंगुने अलुवालाई पहाडे चामलसँग झुक्याएर के।'
'ठिक्क पहाडे बएर्नी जस्तै हुन्छ त्यो मुर्दा।' अर्कोले सघायो तत्कालै।
'चीज पाइयो र खीर खाने नै हो भनेदेखि भनेको,' उसले नहारी भन्दै गयो- 'नुनिया चामल पुरानो, कालो नुनिया अझ राम्रो, मगमग बासना आउँछ, दसबाह्र सेर खाँट्टी दूधमा पकाउनू। पानी-दूध त पन्द्रह सेर लाग्छ। पाँच सेर पानी सुकाउनुलाई पकाउँदा-पकाउँदा चामल जति फुटेर अब लिटो भइसक्छ, खोले। मुठी पारेको जस्तो बाक्लो दूध छ भने सिता सग्लोसग्लै बसेको ठर्रो खीर हुन्छ।
खोले खीर त मुनि डढिसक्छ, भरै जम्मै डढेको गह्नाउँछ, मुनिको पर्नेलाई... ...'
एक छिनपछि अर्कै एक स्वर एक छेउदेखि उम्ल्यो- 'दूध मात्रै ओइराएर हुन्छ? पेस्ता चाहिन्छ, किसमिस, हाडे बदाम, दालचिनी, नरिवल, तेजपात, ल्वाङ जुटाउनुपर्छ। ठिक्कको धीमा आँचमा पकाउनुपर्छ। किसमिस पनि छोड्नुपर्छ। अघाडि छोड्दा फुट्छ।'
'त्यो सब हालेर के हुन्छ -' एउटा उत्सुक सुरिलो स्वरले सोध्यो।
'स्वादको लागि।'- 'बास्नाको लागि।'- 'तागतको लागि।'- झ्याउँ-झ्याउँती त्यसलाई सबले कराए।
'पल्केलास्।' अझै त्यही भत्सर्नाको रहलपहलजस्तो कसैले भन्दै थियो- 'सपनातिर खीर खोजिहिँड्लास्। त्यसरी मन बुझाउलास्।'
'त्यसरी यहाँ खीर पकाएको छ भने बास्ना उः पर बाटोमा हिँड्नेको नाकमा लाग्छ,' अर्कोले भन्यो।
'तेरो खीर, यहीँ बसेको हामीलाई त बास्ना आउँदैन।' बूढाले भनि पनि हाल्यो।
'क्यै नहेरी, गज्जबकै खीर खाऊँ भन्दा तिमी नै पैसा निकाल्नु मान्दैनौ,' प्रतिवादमा आयो उत्तर- 'चोरेर होस्, कमाएर होस्, अर्काको ऋण नतिरेरै होस् जसरी पनि खाइहालेर बाँच्दै गर्नुपर्छ, बाँचिरहनु सक्नुपर्छ।'
'सब चीज जुक्ताएर मात्रै कहाँ हुन्छ, पकाउने सीप हुनुपर्छ' एउटाले थाल्यो, सेतो बाफ जस्तो।
'जैलेसुकै खीर खाएर पनि त भएन, समय पारेर, आफूलाई विचारेर खानुपर्योा,' अर्कोले थप्यो।
'उसो भए मुस्किल रै’छ खीर खानु !' तेस्रोले तीतो करायो- 'असम्भव रै’छ।'
'चलाऊ-चलाऊ ऐले डढ्छ यै पनि !'
'पाक्यो होला, अब त,'
'पाक्यो, पाक्यो !!'
'त्यतिको पाकेकै हो।'
'पाकेछ-पाकेछ,' भएर भाँडा उतारियो। अलि परपर सबै जना हटेको र एक-दुईले ठाउँ रोजेर ओगटेको अनुमान आयो।
खाँदाखाँदै एक जनाले सोध्यो- 'के-के गन्हाएको जस्तो लाग्छ?'
'दाउरा हो दाउरा, अग्गिदेखि म खुब याद गर्दै छु।' कुन्नि कसले भन्यो। शंका मर्दै बौरँदै गरिरह्यो।
'चिनी लागेनछ।' भनेर एक जनाले एक-दुई कदम हिँडी चिनी ल्याई आफ्नो भागमा छर्‍यो।
‘खीरमा खानु नै हो भने,' फेरि त्यही सुरुमा कुरा पकाउने मान्छे खाँदै बोल्दै थियो- 'चिनी होइन, खीरमा गुँड हाल्नुपर्छ। रङ निस्किन्छ।'
'गुँड पनि कालो गुँड होइन, खजुरको पाना-पाना परेको सफा गुँड हालेको मात्रै रसिलो हुन्छ।' दोस्रोले लगत्तै सुधार्‍यो- 'कालो गुँड हालेको त कसरी खानु, छ्या।'
'छ्याः है, कति खानुको कुरा गरेको? कति दिनमा के खीर खाएको हो-होइन, बडे-बडे कुरा हाँकेर... मलाई त कुरीकुरी लागिसक्यो।' यो भन्नेले यता मलाई सुनाएर ग्लानि कम गर्न खोजेको थियो मैले बुझेँ।
'चिनी हालेको गुलियो दूध-भात जस्तो मात्रै भएछ।' मोटो सोरले भन्दा जम्मै तिनीहरू एक्कासि हाँसिनिस्के। पकाउनु सिपालु सोर सबभन्दा लामो हाँसिरह्यो। उसले रोकिँदै हाँस्दै गर्दा सँगै अरूहरू फेरि हाँसे।
आज चार वर्षपछि म त्यो घटनाको अर्थ बुझिरहेछु। तिनीहरूले पकाएको खीर हाम्रो 'जीवन' जस्तो रहेछः जीवनलाई यसरी पो बाँच्नुपर्ने, जीवनलाई उसरी पो काममा लगाउनुपर्ने, प्रयोग गर्नुपर्ने भन्ने थुप्रै-थुप्रै आदर्शहरू हाम्रा मनभरि छन् तर साँच्चैमा बाँच्दाका भूल अपुग र भत्कोसहरूले नछोड्ने हाम्रो यो यथार्थ जीवन तिनीहरूकै खीर जस्तो भइरहन्छ जुन तिनीहरूले कुरा गरेको आदर्श खीरको व्यङ्ग्य जस्तो मात्र थियो।
- 'कथास्था' (सन् १९७२) संग्रहबाट